संसदमा ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच यसरी भयो जुहारी - Ratopati
संसदमा ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच यसरी भयो जुहारी
काठमाडौ जेठ २३–प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार आजबाट संसद खुल्यो । तर, संसद खुलेपछि संसदमा तीनै दलका अध्यक्षको रोचक जुहारी चल्यो ।
उनले भने, ‘त्यहाँ एमालेको सभालाई सुरक्षा दिनका लागि सुरक्षाकर्मी गएका हुन,् सोही क्रममा गोली चल्दा त्यस्तो हुन गयो । तर, एमालेले प्रहरीले गोली किन चलायो भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’
संसद सम्बन्धी आजको अन्य समाचार
केपी ओलीलाई प्रचण्डको कडा जवाफ : बोल्नलाई मात्र केको लाज ?
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु अघि देउवाले भने, ‘प्रचण्ड म्यान अफ कमिटमेन्ट’
बाबुराममाथि प्रचण्डको सनसनीपूर्ण खुलासा : दोस्रो संविधानसभामा मत पत्र जलाउन खोजेको आरोप
महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिँदै संसद बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित
संसदमा प्रचण्डको सम्बोधनः शेरबहादुरजीले दवाव दिएर मैले राजीनामा दिएको हैन
ओलीको प्रश्नमा जवाफ दिन अलमलिए देउवा !
केपी ओलीले संसदमा सोधे– चुनावमा क–कसलाई हराउन नपाइने हो ?
संसदमा ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम प्रभावित भयो’
प्रचण्डले भने– एमाले र काँग्रेस नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर पाएँ
मधेसबारे संसदमा के–के भने केपी ओलीले ?
ओलीको प्रश्न : सप्तरीमा गोलि किन चलाउनुपर्थ्यो ?
मानपदवीमा ओलीको ‘स्लाइड सो’
सरकारको बलमिच्याईँले संसद अवरुद्ध हुन पुग्योः केपी ओली
प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न : सकिँदैन भनेर, झन्झट लागेर छाडेको ?